बडिमालिका मेला भर्न हिँडे तीर्थयात्री | Suvadin !
बडिमालिका मेला भर्न हिँडे तीर्थयात्री
Aug 12, 2019 19:04
काठमाडाै‌, साउन २७ - बाजुराको सिमानामा रहेको बडिमालिका दर्शनका लागि यात्रुहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट निस्किएका छन् । साउन जनैपूर्णिमा अघिल्लो दिन बडिमालिकामा लाग्ने पूजा मेलाका लागि दर्शनार्थीहरू त्यसतर्फ लागेका हुन्। समुद्री सतहदेखि ४ हजार २ सय १६ मिटर उचाईमा रहेका बडीमालिका पुग्न सात दिनको पैदल यात्रामा हजारौँ भक्तालुहरू यात्रामा निस्किएका छन्।
झरी होस् कि जाडो तीर्थालुहरू मौसमको खासै परवाह नगरी दर्शनका लागि त्यसतर्फ लागेका छन्। प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन लाग्ने बडिमालिका मेलालाई यो वर्ष भव्य र व्यवस्थित बनाइने भएको छ। साउन ३० गतेका दिन हुने बडिमालिका माईको पूजाको सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने चरणमा पुगेको छ।
पूजाका लागि जुम्ला र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रसादसहित हप्ता दिनअघि त्यहाँका सरकारी टोली बडिमालिका प्रस्थान गरिसकेका छन्। त्यहाँका सरकारी टोलीले देशमा कुनै अनिष्ट नहोस भनेर भेटी चढाउने छन्। बडिमालिका माईको दर्शनका लागि देश विदेशबाट पनि तीर्थयात्री पुग्ने गर्दछन्। विशेष गरी बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटबाट तीथार्लु पुग्ने गर्दछन्।
कैलालीमा २२ लाख ८२ हजारसहित १६ जुवाडे पक्राउ
नेपालीको 'आस्था' लिलाम गर्नेहरु उम्किनु दुर्भाग्‍य !
अब प्रहरीले अभिनेत्री शिल्पालाई पक्राउ गर्न सक्ने
कोरोनाबाट मर्नेको संख्या ८० नाघ्यो, नेपालमा अझै परीक्षण सामग्री छैनन्